iPad 2 ngwa on iOS 8? Agbalị ndị a Solutions
> Resource> iPad> iPad 2 ngwa on iOS 8/9? Agbalị ndị a Solutions idozi umengwụ Performance na lag
Ọ bụ ezie na iOS 8 / iOS9 nwere tọn oké ọhụrụ atụmatụ na ndozi, na iPad 2 na ọhụrụ na nsụgharị ndị iOS 8/9 dakọtara, o yiri a otutu iPad 2 nwe na-mkpesa banyere urè on iPad 2 mgbe kwalite ka iOS 8 , Apple emeghị enye irè ngwọta dị otú ahụ nsogbu, na ndị kasị njọ akụkụ bụ na anyị na-apụghị downgrade ka iOS 7 ọzọ. Ya mere, olee otú anyị nwere ike mee ka anyị na iPad 2 Ọrụ nkịtị na iOS 8/9 dị ka on iOS 7 dị ka tupu? Ebe a bụ ụfọdụ aro i nwere ike na-ezo aka.
Ngwọta otu: Ike Ịmalitegharịa Your iPad 2
Ọ bụrụ na ndị umengwụ arụmọrụ bụ mgbe ụfọdụ, nke a bụ mgbe ihe mere na ngwaọrụ adịghị rebooted ma mgbe kwalite ka iOS 8, n'ozuzu a ike ibidogharịa nwere ike idozi ya. Dị nnọọ ike anya gị iPad 2 mgbe ahụ jide Ike na Home button concurrently ọnụ ruo mgbe Apple logo-egosi. Ọ na-ewe banyere 10-15 sekọnd na-ebute.
Ngwọta abụọ: onwe elu Space na iPad 2
The iPad mgbe niile jiri mgbe anyị nwere ọtụtụ faịlụ dị ka vidiyo & foto echekwara ma ọ bụ ngwa arụnyere. Ya mere, anyị nwere ike na-agbalị ihichapụ ụfọdụ na-enweghị isi media faịlụ na uninstall ngwa onwe elu ohere na iPad 2 na ọ bịa ọsọ ọsọ. I nwere ike ịmụta otú onwe elu iPad 2 ohere nzọụkwụ site nzọụkwụ ebe a.
Ngwọta atọ: ebuli gị Ntọala
Anyị nwere ike gbanyụọ ụfọdụ ngagharị mmetụta ma ọ bụ ntọala nke ga-emetụta anyị nkịtị were ebuli anyị iPad 2 dị ka n'okpuru:
Iji Setting n'ozuzu> Reset Tọgharia All Ntọala iji melite iPad ịrụ ọrụ.
Gaa Setting n'ozuzu> Accessibility Belata Motion na-atụgharị ya.
Gbanyụọ akpaka download na App ụlọ ahịa na iTunes.
Gbanyụọ akpaaka-mgbazi na gbawara n'etiti keyboard na keyboard ntọala.
Ugboro abụọ pịa Home button ma gbanyụọ ejibeghi ọtụtụ aga-eme.
Ngwọta anọ: Tọgharia ka Factory Ntọala
Ọ bụrụ na ị na-agbalị ọ bụla usoro ma iPad 2 ka eme nnọọ ngwa ngwa dị umengwụ, ị pụrụ ịdị mkpa ka ehichapụkwa ihe niile na tọgharịa ngwaọrụ gị ụlọ ọrụ ntọala. Ọ pụrụ ime ka anyị iPad dị ka a ohuru otu. Ma biko cheta na ndabere gị iPad apụ iji zere data ọnwụ.
Ngwọta ise: Ree ma ọ bụ mgbanwe Your iPad 2
Ọ bụrụ na anọ ngwọta e kwuru n'elu ka ike ghara idozi iPad 2 umengwụ nsogbu, nanị ụzọ m nwere ike na-atụ aro bụ na-ere ma ọ bụ mgbanwe gị ochie iPad 2 n'ihi na a ọhụrụ iPad Air ma ọ bụ iPad Obere. Ị nwere ike ịga Apple.com ma nweta onyinye kaadị mgbe na-atụzi nwale n'ihi na gị iPad 2 ha iwerekwa na imegharị ihe maka ibe. Ma ọ bụ gaa na kọmputa ngwaọrụ Jeriko dị ka Best Buy iji nweta ole na ole dollar na mgbanwe na ịzụta ọhụrụ iPad. Cheta na: Biko cheta nkwado ndabere na mpaghara gị ochie iPad 2 data na nyefee ha ọhụrụ gị iPad.